DILIDA IYO DAYACTIRKA EE DIGAAGGA SUSSEX EE BARXADAHOODA GAARKA AH: SIFOOYINKA UGU MUHIIMSAN EE CAANAHA - BEERAHA DIGAAGA
Qoysaska, digaagga ayaa bilaabay in ay jilaan muddo dheer ka hor bilowgii xilligeena, sidaas darteed nuucyo badan ayaa leh taariikh dheer oo asal ah, taas oo aan waxba ka qaban taranka taranka.
Ka dib oo dhan, si ay u helaan hilib badan iyo badeecooyin ukunta, xitaa beeralayda daaqsinka ah ee hore waxay isku dayeen in ay doortaan oo keliya maadooyinka ugu wanaagsan waxayna kadibna dacaayadiyaan. Later waxaa la ogaaday in isgoyska wakiillada noocyada kala duwan ay sidoo kale kordhin karaan waxsoosaarka shimbiraha, taasoo keentay isticmaalka uureysiga loogu talagalay taranta cusub. Waxay ku saabsanayd sidii oo kale oo ah digaagga Sussex ayaa ku dhashay, kaas oo lagu kala hadli doono hoos.
Waxaanu ku baraarujineynaa sharaxaadda caleemaha iyo dhammaan sifooyinka ugu muhiimsan.
Marka ugu horeysa ee laysku daray ee digaagga Sussex, ama Sussex, oo lagu calaamadeeyey wakhtiyadii hore, markii Boqortooyada Roomaanka ay soo baxday.
Dabcan, in tan iyo wakhtiyadii wakiillada caanuhu ay noqdeen kuwo xayiraad ah iyo, laga yaabee, xitaa aysan lahayn wax wadaag ah kuwa digaagga qadiimiga ah. Waqtiyada kala duwan ee jiritaanka jilicsanaanta, dhiigga kuwa ugu kala duwan iyo kuwa ugu wax soo saar badan ee shimbiraha gudaha isku dhafan:
digaagga daaqsinka Dorking;
Kalluumeysiga midabka cad cad;
Caan ku ah digaagga waxsoosaarkooda Brama.
Inside laftiisa, waxaa sidoo kale jira wakiillo badan oo aad u kala duwan, haddii aan kala saaro by feature ugu muhiimsan - midabka ee daloolka. Maalintii uu ka soo wareegay mid ka mid ah boqorrada Ingriiska, Boqorka Sussex ayaa xitaa la soo saaray, sifooyinka ugu muhiimsan ee ay tahay cadaan raaxo leh oo cad, dho jilicsan oo jilicsan iyo jilicsan oo midab leh lilac.
Si kastaba ha ahaatee, wadamada Midowga Soofiyeeti hore, digaagga ayaa u muuqday in yar oo ka badan nus qarni ka hor. Maanta macaamiishu kuma faafinayaan waddankeena, inkasta oo ay yihiin kuwa ku dhinta kuwa lagu xannibo saldhigooda Sussexes: Adler silver iyo Pervomayskaya, kuwaas oo leh waxyaabo badan oo dibadda ah oo la mid ah awoowayaashooda, waa dad caan ah.
Waa maxay faa'iidooyinka Sussex digaagga iyo sababaha ay u jecel yihiin?
Sannado badan ka hor ayaa ilmaahaan waxaa loogu talagalay si gaar ah nooca hilibka ee wax soo saarka. Si kastaba ha noqotee, sababo kala duwan oo ka yimaada digaagaha ukunta leh, Susseca waxay noqdeen kuwa haysta laanta waxtarka leh ee wax soo saarka. Sidaa daraadeed, maanta caleemaha waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid caalami ah, sababtoo ah Isku-dhafan ayaa isku daraya sifooyinka ugu fiican hilibka-hilibka, iyo sidoo kale farxadda isha leh muuqaal jirka ah oo qurux badan iyo midabyo aan caadi ahayn oo cad cad iyo kala duwanaansho kala duwan.
Laakiin kuwani maahan macnaha ugu muhiimsan ee taranka la tilmaamay, tan iyo markii wakiillada ay ku faani karaan faa'iidooyin muhiim ah oo loogu talagalay taranka: naas-nuujintu way fududahay labada qoys iyo beerta. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in dhammaan wakiilada ee taranka Sussex waxay leedahay dareen qurxin aad u fiican waxayna muujisaa saxsanaanta iyo dulqaadka xaaladdan.
Sidaa daraadeed, isla qofku wuxuu ku fariisan karaa sadexda jiil ee digaagga xagaaga. Xitaa inkastoo cabbirka weyn ee digaaga laftiisa, ukumuhu marwalba way fiicnaanayaan natiijada, digaagga ayaa ka soo baxa dhammaan ugxanta.
Isla mar ahaantaana, haddii ay faa'iido badan u tahay beeraleyda digaaga si ay u qabtaan lakabyo by sabdo lagu sameeyo (maxaa yeelay kiiskan shakhsiyaadka noqon lahaa digaag badan oo miisaan badan oo u tagaan hilibka), markaa dareenka sidoo kale si fudud u dhib yar karaa; si loo ilaaliyo curinta iyo aqoonsigeeda, waa awoodda digaagga in ay u gudbiyaan farcankiisa xayiraadda khaaska ah ee dharkooda.
Waxaa intaa dheer, hidda-wadaha oo ay soo gudbiyaan digaagga waxaa lagu muujiyey oo kaliya ragga. Midabka noocan oo kale ah ayaa la ilaaliyaa, xitaa marka uu ka gudbayo digaagga lagu sharraxay wakiilada nuucyada kale, joogitaanka difaaca jirka ee aad u wanaagsan wuxuu caan ku yahay dadka waaweyn iyo digaagga yaryar. Mahadsanid, caanuhu wuxuu ku faanaa heer aad u sareeya oo ka mid ah saamiyada dhalinyarada, taas oo muujinaysa taas oo aan ka yarayn 95%.
Xayawaaniinta iyo cillado aan la aqbali karin Sussex
In kasta oo xaqiiqda ah in caan this waa caan ku ah hilibka iyo wax soo saarka ukunta, ee Bisaylkiisa kuwaas digaagga kuwaas oo aan la kala sooceen ay precocity. Sidaas, xitaa daloolka ah ee dhalinyaradu waxay bilaabaan inay soo baxaan waqti dambe, mar hore ayey u dhowyihiin bilawga xilliga dayrta. Laakiin weli, mustaqbalka, faa'iido darradani waxay ka badan tahay magdhow lagu muujinayo tilmaamayaasha waaweyn ee miisaanka shimbirta iyo tirada ukunta.
Aad bay muhiim u tahay in aad fiiro gaar ah u yeelato xaqiiqda ah in marka la beerto taranka digaagga ay tahay mid aad u muhiim ah in la fiiriyo sifooyinka muuqaalka ah (waxaan ka hadli doonaa waxoogaa yar), sababtoo ah wakhti ka dambeeya way dhici kartaa. Sidoo kale, inta badan soo bandhigay sifooyinka noocan ah ee digaagga, sababtoo ah shakhsiyaadka guud ahaan waa la aqbalaa inay diidaan.
Nidaamka noocan oo kale ah waxaa badanaa la qabtaa xilliga dayrta markii wakiillada ugu caansan iyo soo jiidashada leh ee la soo xulay, iyo kuwa leh kuwa soo socda faa'iido daro:
qaab muuqaal ah oo cidhiidhi ah, taas oo ah sida saddexagal ah ama la mid ah jidhka digaagga digaaga Orpington, oo Sussexes sidoo kale la soo dhaafay;
sinnaan la'aan dib ugu dhicin daboolka, ama joogitaanka boodada;
xabadka cidhiidhi ah oo aad u yar iyo faaruqin leh unugyo murugsan;
daboolka qaabka jilitaanka dabeecadda;
tarsus, midab huruud ah ama lagu daboolay boomaato;
midab madow ee dhegaha;
gaduudasho midabka jaalaha ah;
shanleabaad badan oo isku dhafan oo midab leh.
Sidoo kale waa in aan la ilaawin in, xitaa marka la isticmaalayo "cillad" Sussexes sida lakab, ukumahooga ayaa loo isticmaali kari waayay in la sii kobciyo. Ka dib oo dhan, wakiillada noocaan oo kale ah ma sii diyaarsan yihiin, oo carruurtoodii looma tixgelin doono sida.
Waxaan soo bandhignaa dhammaan siraha layiraahdo Sussex iyo iyaga oo la socda sifooyinka muuqaalka ah.
Digaagga waxaa laga heli karaa labadaba qoysaska yar yar, halkaasoo keliya shakhsiyado yar yar la siinayo, iyo beeralayda waaweyn, halkaas oo digaagga labadaba la nadiifiyo oo ay ku hawlan yihiin in ay naaso cusub abuuraan. Isla mar ahaantaana, Colombian waa midabka ugu caansan ee beeralayda digaaga: Dhamaan jirka oo idil wuxuu leeyahay baalal cad, kaliya baal madow oo madow ah ayaa ku jira qaab quruxsan qurux badan, iyo baalkuna wuxuu u jilicsanaa baalasha shimbiraha.
Si kastaba ha noqotee, midabkani ma aha mid caalami ah dhammaan xubnaha taranka. Natiijo ka timid shaqooyin farabadan oo tiro badan, shakhsiyaadka leh badeecooyin kala duwan oo kala duwan ayaa ku dhashay. midab khafiif ah:
calico ama porselen;
brown, oo u eg midabka digaagga duurjoogta ah;
lacag (waxaa laga dhaxlay Adens Silver).
Maanta, khubarada ayaa sidoo kale isku dayaya in ay keenaan noocyo cusub oo cusub oo ah midabka digaagga ah: qorfe, cuckoo iyo xataa xayeeysiin. Inkasta oo guulo laga gaaray arrintan horey u jirtey, hase yeeshee, shakhsiyaadkaasi ma ahan kuwo caadi ah oo aan weli helin fursad ay ku kasbadaan.
Faa'iidada muhiimka ah ee taranka waa awooda lagu go'aamiyo dhiiga saafiga ah ee shakhsiyaadka adigoo midabkiisa kaligiis ah. Sidaa daraadeed, digaagga dhabta ah ee caanaha Sussex waxay leeyihiin midab caan ah oo caan ah oo caan ah. Laakiin Beelaha ay leeyihiin midab madow oo midab leh oo jilicsan oo haween ah, oo aad u iftiiminaya labka.
Markay tahay qiyaasta, waxaa sidoo kale jira dhowr sifooyin ah oo kaliya maaha inay go'aamiyaan caleemaha, laakiin sidoo kale kala saar digaaga ka soo horjeeda. Si loo hubiyo arrintan, si gaar ah waxaan u baran doonaa sifooyinka mid walbana waxaan ka bilaabi doonaa wakiilada ragga:
Dibedda, roosters abuuro aragti ah ee ballaadhan iyo adkaysiga;
marka la barbardhigo jirka oo idil, madaxa waa mid aad u yar, laakiin waa ballaaran;
guluubka waxaa lagu gartaa qaab isku mid ah, midabyo kala duwan oo casaan leh ama midab leh, oo si siman u dhaqaajiya xagga sare ee mugdiga ah;
qaabka cirifka ayaa ah kan ugu fudud, toosan; waa mid aad u yar oo cabbir ah, wuxuu leeyahay taxane 4-5 oo yar, oo ilko dheelitiran, dhererkoodu wuxuu u dhigmaa kala badh dhererka godka;
maqaarka shanlada waa mid aad u jilicsan ee taabashada, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay dusha sare wax yar oo "macaan", taas oo, markaad taabato, dareemayso sida xumbo; saldhigeedu waa mid aad u cufan oo xoog badan;
indhaha Sussex waxay ku kala duwan yihiin midab casaan ama casaan midab leh oo leh dabeecad tani leh wax yaryar oo yaryar;
xaywaanka wakiilada caleemaha ayaa si liidata loo horumariyay, aad ugu adkeeysan dusha sare ee madaxa, waxay leeyihiin midab casaan ah;
Guntimaha sidoo kale waxay leeyihiin casaan cas, qaabka kala duwan ee wareega iyo dusha sare ee jilicsan iyo jilicsan;
qoortu ma ahan mid dheer, laakiin aad buu u weyn yahay saldhigga oo si tartiib tartiib ah u gudubta madax yar, waxaa lagu qurxiyaa xayawaan aad u qurux badan oo qurux badan;
qaabka jidhka ee wakiilada jinsiga la tilmaamay ayaa ah qaab qaansar ah iyo qadar ahaanba, oo leh qaybo saamigal ah oo jirka ka mid ah;
inkastoo dhabarka uu yahay mid ballaaran, laakiin dhinaca hoose wuxuu si macquul ah u dulqaadanayaa, halkii uu ku faafi lahaa xajmiga cawska ee gobolka lumbar;
xitaa daboolka qulqulatadu waa yar yahay, laakiin waxay ku badan tahay saldhigga, si yar kor ugu kaca sare; daboolka wuxuu ka kooban yahay baalal dusha sare ah iyo dhar-gaaban oo gaaban, kaas oo si buuxda loogu arki karin sababo la xiriira qurxinta quruxda badan;
laabta ayaa lagu kala gartaa baaxad gaar ah, tan iyo tiro badan oo murqaha ku urursan; xadhigga laabta ah ee dhuunta ayaa ka baxda inta u dhexeysa, ka dibna xajmiga aadka u dheereeya wuxuu u dhexeeyaa xariiqda jiifka ah ee jirka;
caloosha ayaa si aad ah u muuqata maxaa yeelay waa mid aad u cakiran; waxay dareemeysaa mid aad u jilicsan ee taabashada;
soohdinta baalasha ee Sussex waa mid aad u sarreeya, oo markiiba soo qabta indhaha beeralayda khibrada leh ee digaaga; ma ahan waqti dheer, kufilan jidhka;
tibiae dhexdhexaad ah oo dherer ah, halkii murqaha, daboolay jilicsan oo wacan oo leh xajinta taabashada iyada oo aan lahayn daacad;
midabka midabku wuxuu leeyahay midab cad, oo leh suurtogalnimada jiritaanka jilbaha madow; deenishku waa dhexdhexaad, waxay leeyihiin afar farood;
Guud ahaan, daloolka shimbirahan waxaa lagu sharxi karaa jilicsan, xitaa, adoo adkeynaya jirka.
Laakiin halkan diga of Sussex jilcan by calaamadahaas oo dhan waa adag tahay in la go'aamiyo, maadaama ay leeyihiin waxoogaa sifooyin kale. Sidaa daraadeed, way ka jilicsan yihiin taakulada muuqaalka waxaa lagu gartaa sifooyinka noocaas ah:
Madaxiisu aad u yar tahay oo xitaa ka yar madaxa madaxiisa;
shanlo yaryar, oo leh afar iligood;
leydi, laakiin qaab jidheed, oo leh qaab wali ah;
dhererka qoorta waa ka gaaban yahay taakulada;
aad u xoog badan oo lugaha leh;
daboolka waa yar yahay, wuxuu ka kooban yahay daboolka iyo baaldarrada daboolka, oo leh xidhitaan hore oo ka badan nuskii dambe;
Kaararka sidoo kale waa mid aad u jilicsan oo cufan, on caloosha waxaa jira wax badan oo baalal midab leh caddaan ah.
Wax-soo-saarka shimbiraha shimbiraha ee Sussex
Shimbirahaasi waa kuwo gaar ah, maadaama ay ku farxaan milkiilayaashooda leh wax soo saar aan caadi aheyn, sharaxaada kaas oo ka bilaabi doona miisaanka:
roosters of Susan Susse ayaa gaari kara weyn oo aad u weyn, miisaankoodu waa kala duwan yahay 2.8 illaa 4 kiilogaraam;
Digaagga si dabiici ah ayay u yar tahay, miisaanka celceliska waa 2.4-2.8 kiilo.
Marka laga soo tago xaqiiqda ah in hal bakhti ah aad heli karto tiro badan oo hilib ah, sidaas darteed waxaa sidoo kale lagu calaamadiyay guryaha iyo waxyaabo aad u wanaagsan. Tan ugu muhiimsan, waxay dhadhamisaa weyn - aad u jilicsan, taas oo dhameystiraya juiciness gaar ah ee hilibka. Waxaa sidoo kale mudan in la ogaado in ay tahay mid inta badan caddaan ah, sidaas darteedna aan caadi ahayn hodan ku ah borotiinka.
Wakiilo ka mid ah jinsiga Sussex ayaa si dhakhso ah u koraya oo miisaanka kor u kaca, kaas oo, naas nuujin, wuxuu kuu oggolaanayaa in aad si deg-deg ah u hesho shakhsiyaadka ku haboon ee loo gowraco. Marka ay da'doodu tahay 70 maalmood dhallinyaradu waxay gaaraan miisaan dhan 1.5 kilo oo aan dhibaato lahayn.
Tani waxay sidoo kale qaangaadhisay marka loo eego ukumaynta. Haddii digaagga dhallinyarada si wanaagsan loo daryeelo, u sii dheerow meel bannaan oo socod ah oo ku siiya qadar ku filan oo quudiya, ka dibna waxay billaabi doonaan in ay ukumeeyaan shan sano jir. Sannad gudihiis hal mar ayaa laga qaadi karaa 160 ilaa 190 ukumood. Tilmaamahani wuxuu ku xiran yahay xaaladaha xabsiyada.
Sidoo kale, ukunta-siinta ayaa si weyn loo yareeyey xilliga cimilada qabow iyo heerkulka aad u hooseeya. Tilmaamaha ukumaha digaaga Sussex waa sida soo socota: qolofku wuxuu noqon karaa iftiin ama madow madow, mararka qaar xitaa cagaaran, waxayna miisaamaan min 56 ilaa 58 garaam.
Sidoo kale, sababtoo ah boodh aad u baaxad weyn, digaagani waxay ka qiimo weyn yihiin ilaha qani ah ee fluff. Intaa waxaa dheer, hoos-u-dhacu waa mid caan ku ah jilicsanaanta iyo jilicsanaanta, sidaa daraadeed waxaa si weyn loo isticmaalaa wax-soo-saarka barkimooyinka iyo baalasha.
Waxaan soo saareynaa oo ku jilcinaynaa Sussex jilicsan ee ku jira qaybtayada gaarka ah: siraha beeraha digaaga ee guulaha leh
Waxaad bilaabi kartaa digaagga quruxda badan ee laba nooc: Ku soo iibso dhallinta Sussex ee suuqyada, ama ukumaheeda, oo keen digaagga naftaada. Mustaqbalka, loogu talagalay taranta taranka, digaaga ayaa laga isticmaalaa beerahooda, iyo sidoo kale ukumaha, oo ay hoos u dhigeen. Nasiib wanaag, laakiin ukumaha iyo digaagaha tiro yar oo shakhsiyadeed ah ayaa kugu filan si aad u hesho dhalinyaro wanaagsan.
Caadi ahaan, digaagga waxaa lagu beeray ukumo u dhow xagaaga, sidaa daraadeed digaagaha dhasha ayaa si sahlan loo heli karaa xaalado cusub. Maskaxda ku hay in muddada dhalashada ee ukunta digaaga ay caadi ahaan socoto 20-21 maalmood. Sida ka mid ah hen waa qiimo hoose laga bilaabo 13 ilaa 15 ukun. Isla markaa, waa inaadan ka baqin in Sussexes weyn ay dhaawici karto ukunta ama ay u jajabiso - kiiskan waa kuwo aad u taxadar leh oo hagaagsan.
Maalmihii hore, chicks yar yar waa in lagu hayaa qolka iftiinka saacad kasta. Xaaladahaas waxaa la bixiyaa qiyaastii laba toddobaad, si tartiib tartiib ah u yareynaya waqtiga iftiinka sida habka ay u dhigan tahay maalin caadi ah. Waxay ku quudiyaan tani badi ahaan cuntooyinka gaarka ah ee ay tahay in ay gaarto qaybaha da'da qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, haddii aysan suurtagal ahayn in si joogto ah loo iibsado cunto, waxaad isticmaali kartaa sida caadiga ah: hadhuudhka, khudaarta cagaaran, qashinka cuntada, cuntada cagaaran. Ha ilaawin biyo nadiif ah, oo had iyo jeer ku jiraa guriga iyo meel u dhow.
Aad u faa'iido leh haddii digaagga ay awoodaan inay si joogto ah u socdaan. Iyadoo mahad leh, waxay xoojin doonaan difaacooda, horumarin doonaan. Waa inay jirtaa meel ciid iyo dambas u dhow meeshii socodka ee u adeegi lahaa shimbiraha sida "bathtub". Waad ku mahadsan tahay sida qubeyska, ma waxay kaliya ma nadiifin karaan baadad, laakiin sidoo kale ka takhalusi dulinada kala duwan.